म हुँ महालेखाको कर्मचारी : सबैले मान्ने, सबैले गन्ने (१)
बेला बखत सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग अथवा मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक अंगले गरेका काम कारबाहीको व्यापक आलोचना हुने गर्छ । पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको एउटा सुनुवाइ यस्तै गरी चर्चामा छ ।
आलोचनाका हिसाबले संवैधानिक अंगमध्ये महालेखा परीक्षकको कार्यालय भने तुलानात्मक रूपमा कम आलोचित हुने गरेको छ । त्यसभन्दा बढी आलोचित राष्ट्रपति कार्यालय हुने गर्छ ।
यतिबेला चर्चामा भने महालेखाको ५७औँ प्रतिवेदन रहेको छ । चैत मसान्तमा सार्वजनिक गर्ने गरिएको प्रतिवेदन कोभिड- १९ का कारण ढिलागरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असार मसान्तमा मात्र सार्वजनिक गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रुजु हुन नसकेको अथवा रीत नुपर्‍याई भएको खर्च ४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ (राजस्व तथा सहायताबाहेक) पुगेको ५७औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाको ४६औँ प्रतिवेदनमा यस्तो बेरुजु ९० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको थियो ।
केही फर्छ्यौट हुन्छ, त्यसभन्दा धेरै बढ्छ । बढ्दै जाँदा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । १० वर्षमा ६ गुणाभन्दा बढी यस्तो बेरुजु बढेको छ । यति ठूलो रीत नुपर्‍याइएको खर्च निकाल्ने महालेखा परीक्षककको कार्यालयमाथि पनि बेलाबखतमा अनियमितताको शंका भने गरिएको हुन्छ ।
यस्तै शंका विगतदेखि नै गरिँदै आएकामा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले १८ साउन २०७४ मा मन्त्रालयका सचिसवहरूसहित लेखा अधिकृतहरूसँगको छलफलमा समेत व्यख्या गर्ने प्रयास गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, 'तपाईंहरू (सचिवहरू)ले हामी अडिटरलाई जुठो नपारिदिनुस् ।'
'जुठो' अर्थात् लेखापरीक्षकलाई पनि लेखापरीक्षणका क्रममा घूस खुवाइदिने । यसै सन्दर्भमा एक जना सरकारी कर्मचारीले गरेको व्यख्याको आधारमा तयार पारिएको सामग्री हो यो ।
म लेखापरीक्षक (१)
मेरो जस्तो जुत्ता को लगाउन सक्छ होला र ! नेपालमा त पाइँदै पाइँदैन । सरकारी ड्रेस लगाउने बाध्यता हो तर मैले लगाउने कपडा लगाउने धेरैले हैसियत राख्दैनन् । त्यसले मात्र यो हैसियत राख्छ, जसले मैले जस्तै कर्म गर्छ र मर्म बुझ्छ ।
अर्बको हिसाब हेर्ने मान्छे हुँ ! कहाँ छु र सानो, संवैधानिक अंगको कर्मचारी ! धेरै दु:ख गरेका कारण लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी पाएको हुँ । मौकाको फाइदा पनि उठाएकै छु, धन्य भगवान !
(ती लेखापरीक्षक फिल्डमा जाँदै छन् र साट्दै छन् भावना)
म आउँदै छु, विशेष व्यवस्था होस् । जिल्लामा फोन पुगिसकेको छ । मेरो स्वागतमा जिल्ला तयार छ । गत वर्षको भन्दा थप भव्य हुने आशा राखौँ । भन्नै परेन, जिल्लाबाटै आइपुग्यो गाडी । मुख खोलेको भए हेली चार्टर पनि हुन सक्थ्यो होला ।
बिहान-बेलुकाको खानाको मेन्यु तयार गरिएको छ । बेलुका गरिने मनोरञ्जनका लागि पनि तयार छ ।
पहिलो दिन व्यापक खानपिन, नाचगान र अरूअरू धेरै हुन्छन् । मेरै लागि जिल्लाका सरकारी कार्यालय र सरकारी स्वामित्वमा रहेका कार्यालयहरूले सेवाका लागि रकम उठाएका छन् ।
तर, मेरो सेवाका लागि यति धेरे रकम उठाए, सेवा गरे भन्दैमा अडिट नै गर्न छाड्नु त कहाँ भयो र ! कडाइका साथ गर्नु छ अडिट । कसैले मलाई चिन्यो भने भाषा सामान्य गर्नुपर्ला- पुन: श्रम अडिट गर्न आउने म नै हो, म नआए पनि मेरै साथी आउँछ । आखिर सबैको कुरा यस्तै त हो नि !
लेखापरीक्षणको काम सुरु भएको हुन्छ । म बसेको बाहिर धेरै जना लाइन बसेका छन्- परीक्षण गराउन । सबैको एकै समयमा हुने कुरा भएन कसैको २० मिनेटमै हुन्छ, कसैको २ घण्टा पनि लाग्न सक्छ ।
कही लेखापरीक्षण गराउन आउनेहरू आफूलाई बाठो सम्झिन्छन् र कालोलाई कालो नै भन्छन् । बिचरालाई भन्दै छु- किन जान्ने भएको ? कति त फेरि हेर्न आग्रह गर्छन् । भाव नबुझ्नेहरू यस्तै हो ।
त्यस्तो जिद्दी गर्नेहरू 'फुल अडिट'मा पर्छन् । अडिट गरेपछि बेरूजु नदेखिने त कुरै हुँदैन, देखिई नै हाल्छ । नदेखिए एउटा प्रमाण हराउँछ । कसैको प्रमाण बुझिएको नहुन सक्छ ।
त्यस दिनको काम सकियो, बेलुका त्यसै गरी सत्कार भयो । हेर्दाहेर्दै २ साता बिती नै गयो । धेरै काम गरिएछ । कार्यालयमा गएर देखाउने बेरुजु पनि राम्रै निकालिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण मात्र होइन, आफ्नै सम्पत्ति जोहो पनि हो लेखापरीक्षण- मनमनले त्यसो भने पनि सबैले सुन्ने राज्यको सम्पत्ति संरक्षणका लागि मेरो पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु ।
म आउँदा राम्रै बिदाइ भयो । परीक्षणको क्रममा कालोलाई कालो भन्ने अधिकारी पनि आज नरम भएको छ । मेरो इज्जतको खातिर उनीहरूले गर्नुपर्ने सबै काम गरेका छन् तर पनि अडिटमा परेपछि बेरुजु देखिन्छ । कतिको साँच्चिकै, कतिको मैले बेरुजु नदेखेर पनि अरूलाई देखाउन सक्ने बेरुजु ।
मैले नदेख्ने अरूले देख्ने बेरुजुका कारण केही न केही सहायता पुगेको छ । मेरो यो प्रतिष्ठा बनेको छ ।
बाँकी ब्लग २ मा
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ६, २०७७, ११:२२:००